Esi ewepu iTunes site na iTunes
Maka oge mbụ na-arụ ọrụ na iTunes, ndị ọrụ nwere nsogbu dịgasị iche iche metụtara iji ụfọdụ ọrụ nke usoro ihe a. Karịsịa, taa, anyị ga-elebakwuo anya na ajụjụ nke otu ị nwere ike ihichapụ egwu site na iPhone gị iji iTunes. iTunes bụ otu mgbasa ozi na-ewu ewu bụ onye isi nzube ya bụ ijikwa ngwaọrụ Apple na kọmputa.
Maka mma nke ịhazi egwu maka iche iche ngwaọrụ Apple, ịhọrọ egwu dịka ọnọdụ gị ma ọ bụ ụdị ọrụ gị, iTunes nwere ọrụ ọkpụkpọ listi ọkpụkpọ nke na-enye gị ohere ịmepụta listi egwu nke egwu ma ọ bụ ndekọ vidiyo nke ị nwere ike ịhazi ma faịlụ ndị dị na listi egwu ma jụọ ha iwu achọrọ.
ITunes bụ otu mgbasa ozi na-ewu ewu maka kọmputa na-agba Windows na Mac OS, nke a na-ejikarị achịkwa ngwaọrụ Apple. Taa, anyị ga-elele ụzọ ị ga-esi na ngwa Apple gaa na kọmputa. A na-ejikarị iTunes maka Windows iji jikwaa ngwaọrụ Apple.
Ọtụtụ ndị ọrụ anụwo banyere àgwà nke ngwaahịa Apple, Otú ọ dị, iTunes bụ otu n'ime usoro mmemme ndị ahụ nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ọ bụla, mgbe ọ na-arụ ọrụ, izute ezughị okè na-arụ ọrụ. Isiokwu a ga-atụle ụzọ iji kpochapụ njehie ahụ. Njehie 21, dị ka a na-achị, na-adabere na malfunctions ngwaike nke ngwaọrụ Apple.
N'ikpeazụ, iTunes na-eji kọmputa mee ihe na kọmputa site n'aka ndị ọrụ iji jikwaa ngwaọrụ Apple ha, dịka ọmụmaatụ, iji rụọ usoro mgbake. Taa, anyị ga-eleba anya na ụzọ isi edozi nsogbu ahụ mgbe edoghi iPhone, iPod ma ọ bụ iPad site na iTunes. Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara enweghi ike iweghachi ngwa Apple na kọmputa, na-amalite site na iTunes ma ọ bụ kwụsị nsogbu nsogbu.
Otu esi ehichapụ foto site na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod site na iTunes
ITunes bụ ngwá ọrụ maka ijikwa ngwaọrụ Apple site na kọmputa. Site na mmemme a ị nwere ike ịrụ ọrụ na data niile na ngwaọrụ gị. Karịsịa, n'isiokwu a, anyị ga-ele anya otú ị nwere ike ihichapụ foto site na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod Touch site na iTunes.
Nchọpụta nsogbu Error 54 na iTunes
Ụdị nsogbu dị iche iche na usoro ahụ na-akpata ọdịda nke na-eweta njehie. ITunes nwere ọtụtụ njehie, mana, ọ dị mma, njehie ọ bụla nwere koodu nke aka ya, nke na-eme ka ọ dị mfe idozi nsogbu ahụ. Karịsịa, isiokwu a ga-atụle njehie na koodu 54.
Na usoro nke na-arụ ọrụ na iTunes, ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike izute ụdị njehie dị iche iche mgbe ụfọdụ, nke ọ bụla na-esonyere ya koodu. Ya mere, taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi edozi njehie ahụ na koodu 1671. Usoro njehie 1671 na-eme ma ọ bụrụ na nsogbu dị n'etiti njikọ gị na iTunes.
Ụzọ iji dozie njehie 2009 na iTunes
Ma anyị na-achọ ya ma ọ bụ na ọ bụghị, anyị na-ezute mgbe ụfọdụ ọtụtụ njehie mgbe anyị na iTunes na - arụ ọrụ. Njehie ọ bụla, dịka iwu, na-eso ya ọnụ ọgụgụ pụrụ iche, nke na-enye ohere ime ka nsogbu nke iwepụ ya dị mfe. Isiokwu a ga-atụle koodu njehie 2009 mgbe ị na - arụ ọrụ na iTunes.
Ụzọ iji dozie njehie 3014 na iTunes
ITunes bụ otu mgbasa ozi mgbasa ozi na-ewu ewu ejiri rụọ ọrụ na ngwaọrụ Apple na kọmputa. O di nwute, ọrụ nke mmemme a enweghi ike inwe ihe ịga nke oma ma oburu na enwere njehie na ederede. Isiokwu a ga-atụle ụzọ iji dozie njehie 3014 na iTunes.
N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-eji iTunes na-echekwa egwu nwere ike gee ntị na usoro ihe omume ahụ, yana edekwara ya na ngwaọrụ Apple (iPhone, iPod, iPad, wdg). Taa, anyị ga-eleba anya na ị nwere ike iwepụ egwu niile agbakwunyere na usoro a. ITunes bụ ngwakọta multifunctional nke enwere ike iji dịka onye ọkpụkpọ mgbasa ozi, na-enye gị ohere ịzụta ihe na Ụlọ Ahịa iTunes ma, n'ezie, mekọrịta ngwa ngwa apụl na kọmputa gị.
Njehie "Ntọala zutere njehie tupu nhazi Microsoft" mgbe ị na-etinye iTunes
Anyị na saịtị anyị echeworịrịrị ihe dịgasị iche iche njehie nke na-ebili n'usoro iji iTunes. Taa, anyị ga-ekwurịta banyere nsogbu dịtụ iche, ya bụ mgbe onye ọrụ ahụ adịghị edozi iTunes na kọmputa n'ihi njehie na-agbapụ "Nchọpụta ahụ achọpụtawo njehie tupu nhazi iTunes".
Otu esi emezue njehie 9 mgbe ị na - arụ ọrụ na iTunes
Na usoro nke iji iTunes na komputa, onye ọrụ nwere ike izute ọtụtụ njehie nke na-eme ka o sie ike ịkwụsị ọrụ ahụ. Taa, anyị ga-ebi na njehie na koodu 9, ya bụ, anyị ga-enyocha isi ụzọ ọ na-enye ohere iji kpochapụ ya. Dị ka a na-achị, ndị ọrụ nke ngwa ngwa apple zutere njehie na koodu 9 mgbe emelite ma ọ bụ weghachi ngwaọrụ Apple.
Ụzọ maka Idozi Njehie 4005 na iTunes
Dị ka ihe omume ọ bụla maka Windows, iTunes adịghị echebe site na nsogbu dị iche iche na ọrụ ahụ. Dị ka usoro, nsogbu ọ bụla na-esonyere njehie na koodu ya pụrụ iche, nke na-eme ka ọ dị mfe ịmara ya. Esi kpochapụ njehie 4005 na iTunes, gụọ isiokwu ahụ. Njehie 4005 na-emekarị na usoro nke imelite ma ọ bụ weghachi ngwaọrụ Apple.
ITunes anaghị ahụ iPhone: isi ihe kpatara nsogbu ahụ
Dị ka ọ na-achị, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na-eji iTunes mee ka ngwaọrụ Apple dị na kọmputa. N'isiokwu a anyị ga-agbalị ịza ajụjụ nke ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na iTunes adịghị ahụ iPhone. Taa, anyị ga-ele anya isi ihe kpatara nke iTunes anaghị ahụ ngwaọrụ gị.
Esi edozi iPhone, iPad ma ọ bụ iPod site na iTunes
Ọ bụrụ na nsogbu bilite na arụ ọrụ nke ngwaọrụ Apple ma ọ bụ iji kwadebe ya maka ire ere, a na-eji iTunes mee usoro nkwụghachi nke na-enye gị ohere ịnyeghachi ngwa ngwa na ngwaọrụ ahụ, na-eme ka ngwaọrụ dị ọcha dị ka ọ bụ mgbe ịzụrụ. Ịmụta otú e si eweghachi iPad na ngwaọrụ Apple ndị ọzọ site na iTunes, gụọ isiokwu ahụ.
Otu esi emezue nsogbu 2003 na iTunes
Njehie mgbe ị na-arụ ọrụ na iTunes bụ ihe a na-ahụkarị na, ka anyị kwuo, ihe ngosi na-adịghị mma. Otú ọ dị, ịmara koodu njehie, ị nwere ike ịmatakwu ihe kpatara ya, ya mere, mee ya ngwa ngwa. Taa, anyị ga-atụle njehie na koodu 2003. Njehie na koodu 2003 na-egosi na ndị ọrụ iTunes mgbe enwere nsogbu na njikọ USB na kọmputa gị.
Esi emelite iTunes na kọmputa gị
Ezigbo ngwanrọ ọ bụla na oge nata mmelite nke a ga-arụnyere. Mgbe ị na-elele ihe omume ahụ, ọ dịghị ihe gbanwere, ma nwelite ọ bụla gosipụtara mgbanwe dị ịrịba ama: oghere mmechi, nke kachasị elu, na-agbakwụnye mmụba nke yiri ihe na-apụghị ịhụ anya n'anya.
Dị ka a na-achị, a na-edozi ọtụtụ nsogbu na ọrụ iTunes site na ntinyeghachi ihe omume ahụ kpamkpam. Otú ọ dị, taa, anyị ga-atụle ọnọdụ mgbe "iTunes Library.itl File" na-egosi na ihuenyo onye ọrụ mgbe ị na-agbalite iTunes, ebe ọ bụ na mbipute ọhụrụ nke iTunes kere ya.
ITunes omume mgbe ejikọtara iPhone: isi ihe kpatara nsogbu ahụ
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịnyefe ozi site na kọmputa ahụ gaa na iPhone ma ọ̄ bụ akaebe, na mgbakwunye na eriri USB ị ga-achọ usoro iTunes, na-enweghị nke ọtụtụ ọrụ ndị achọrọ agaghị adị. Taa, anyị ga-eleba anya na nsogbu mgbe iTunes na-akwụ ụgwọ mgbe ị jikọtara iPhone gị. Nsogbu iTunes tinyere mgbe ị jikọtara ọ bụla n'ime ngwaọrụ iOS bụ otu n'ime nsogbu ndị kachasị emetụta nke nwere ike ịmetụta ya.
https://termotools.com ig.termotools.com © ITunes 2020